Madaarka Moscow Sheremetyevo wuxuu soo saaray Xal Cusub oo loogu talagalay Xakamaynta Laamiga Garoonka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Madaarka Moscow Sheremetyevo wuxuu soo saaray Xal Cusub oo loogu talagalay Xakamaynta Laamiga Garoonka
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Waajib ah • Wararka Ruushka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Nidaamka Xakamaynta Burburka Wadada Isdhexgalka waxaa la sameeyay kadib falanqeyn taxaddar leh iyo tijaabinta xalalka injineernimada kala duwan.
Nidaam cusub oo lagula socdo xaaladaha laamiga garoonka.
Nidaam cusub ayaa ka caawin doona garoonka diyaaradaha dayactirka waqtigiisa iyo qorsheynta dayactirka muddada dheer.
Nidaamka waxaa ku jira macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan cilladaha garoonka iyo dayactirka la sameeyay.
Moscow Madaarka Caalamiga ah ee Sheremetyevo waxay soo saartay nidaam macluumaad juqraafiyeed oo casri ah oo lagula socdo xaaladaha laamiga garoonka iyo ka caawinta garoonka diyaaradaha dayactirka waqtigiisa iyo qorsheynta dayactirka muddada dheer.
Nidaamka Xakamaynta Burburka Wadada Isdhexgalka waxaa la sameeyay kadib falanqeyn taxaddar leh iyo tijaabinta xalalka injineernimada kala duwan. Waxay u adeegsaneysaa gegida diyaaradaha ee garoonka diyaaradaha ee Synchron waana isha kaliya ee xogta laga helo xaaladda dhabta ah ee hawlgalka ee laamiga macmalka ah ee dhammaan qaybaha garoonka.
Nidaamka waxaa ku jira macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan cilladaha garoonka iyo dayactirka la sameeyay, oo ay ku jiraan muuqaalka cunsurrada gaarka ah ee garoonka, wuxuuna leeyahay qayb ka kooban warbixinno.
Nidaamku wuu oggol yahay Gegada Diyaaradaha Sheremetyevo injineerada si ay ula socdaan xaaladaha ku saabsan laamiga macmalka ah isla markaana ay si deg deg ah uga jawaabaan wixii leexashooyinka ah, iyada oo ay ugu wacan tahay muuqaal muuqaal ahaan u muuqda cilladda ku jirta khariidadda guud ee garoonka diyaaradaha. Nidaamku wuxuu kaloo diiwaangeliyaa macluumaadka muhiimka ah ciladaha gaarka ah ee laamiga garoonka, oo ay kujiraan nooca iyo nooca cilladda, ciladda meesha saxda ah, taariikhda iyo waqtiga ciladdu ay ahayd ogaanshaha, cabirka cilladaha, iyo heerka khatarta ay soo bandhigtay cilladda.
Nidaamku waa qalab wax ku ool u ah maaraynta farsamada iyo maaliyadda iyo sidoo kale nabadgelyada maxaa yeelay waxay ka caawisaa maareynta garoonka diyaaradaha qorshaynta maaliyadeed ee muddada-dheer, qiyaasidda ilaha loo baahan yahay dayactirka laamiyada macmalka ah iyo xakamaynta shuruudaha dayactirka ee dammaanad qaadka ah
Gegada diyaaradaha Sheremetyevo waxay ka mid tahay xarumaha TOP-5 ee kuyaala qaarada Yurub, garoonka ugu weyn Ruushka marka laga hadlayo rakaabka iyo xamuulka. Sanadkii 2020, garoonka diyaaradaha waxaa u adeegay 19 milyan 784 kun oo rakaab ah.